रेखा थापाको ‘मालिका’बाट निर्देशक हटिन् « Ramailo छ
रेखा थापाको ‘मालिका’बाट निर्देशक हटिन्
‘लाल मस्तिष्क’ बाट ‘मालिका’ बनेको रेखा थापाको फिल्मबाट निर्देशक सम्झना रौनियारले हात झिकेकी छन् । आइतबार बिहानै फेसबुकमा छोटो स्टाटस लेख्दै रेखाको ‘मालिका’मा आफु नरहने निर्देशक रौनियारले जनाएकी हुन् ।
‘कार्य भिन्नताका कारण मैंले रेखा थापाको मालिका छाडेकी छु’, निर्देशक रौनियारले लेखेकी छन्, ‘रेखालाई फिल्म सफलताको शुभकामना । धन्यवाद !’ फिल्म निर्माण घोषणासँगै रेखाले निर्देशकमा सम्झनाको नाम उल्लेख गरेकी थिइन् । तर फिल्मको छायाँकन सुरु हुनै लाग्दा निर्देशक हटिन् । किन त ? ‘सायद रेखालाई म माथि विश्वास भएन होला’, निर्देशक रौनियारले छोटकरीमा भनिन् ।
निर्माता तथा नायिका थापाले भने यस विषयमा अहिले नै केही नबोल्ने बताइन् । ‘सबै कुरा पछि थाहा पाउनु हुनेछ’, रेखाले भनिन् । ‘मालिका’को नयाँ निर्देशक पनि तय भैनसकेको उनले बताइन् ।’हिम्मतवाली’मा निर्देशक श्याम भट्टराईलाई सुटिङ सेटबाटै निकालेकी रेखाले मालिकाको छायाँकन सुरु नहुँदै किन निर्देशक रौनियारलाई छोडिन् ? त्यो भने चासोको विषय बनेको छ । यो भिडियो पनि हेर्नुस् :
यही बैशाखको तेश्रो सातादेखी छायाँकन सुरु हुने मालिका तिहारमा लाग्दैछ । फिल्मका लागि रेखासँगै जाजरकोटकी १४ वर्षिय बालिका पक्का भएकी छन् ।